Akwụkwọ ndị French Revolution
Ntughari mgbanwe nke French #1
Ntughari mgbanwe nke French #2
Ntughari mgbanwe nke French #3
Ntughari mgbanwe nke French #4
Ntughari mgbanwe nke French #5
Ntughari mgbanwe nke French #6
Ntughari aka nke French
Ntughari edemede nke mgbanwe nke French
Ntughari aka nke French LZ
Ihe osise eserese French
Ọkọ akụkọ ihe mere eme nke French
Usoro mgbanwe nke French
Nchịkwa ncheta mgbanwe nke French - ihe omume 1789-91
Nchịkwa ncheta mgbanwe nke French - ihe omume 1792-95
Ntughari ncheta nke mgbanwe nke ndi ozo nke ndi France - ihe mere na 1788
Ntughari ncheta ihe ndi ozo nke ndi Ju
Ntughari ncheta nke ndi ochichi nke ndi France
Ntughari ncheta nke ndi ochichi nke ndi France - ndi isi
Ntughari ncheta nke ndi ochichi nke ndi France.
Ntughari uche nke mgbanwe nke ndi French.
French Revolution iranti ajụjụ - okwu (III)
Revolutionkọ okwu mgbanwe nke French
Ntughari aka nke French #1
Ntughari aka nke French #2
Ntughari aka nke French #3
Ntughari aka nke French #4
Ntughari aka nke French #5
Ntughari aka nke French #6
Usoro mgbanwe nke French maka ndị mbido
Isiokwu ntụgharị nke French
Ntughari French onye bu
Okwu mgbanwe nke French Revolution - echiche
Frenchse na-ekwu okwu - ihe omume
Wordsearch French Revolution - ndi mmadu
Frenchsesesese okwu - ebe
Okwu ndị mgbanwe French
French mgbanwe nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile anyị na - esonyere na ntụgharị - mkpagharị royals, oké ọchịchị aka ike, ụtụ isi dị ukwuu, iwe ihe ubi, ụnwụ nri, ndị obodo agụụ iwe, ndị mmadụ inwe mmekọahụ, ịgha ụgha, nrụrụ aka, ime ihe ike, ọgba aghara na njikwa nzuzo, asịrị na izu ọjọọ, ụjọ na-atụ nke gọọmentị na-akwado. na igwe ndi isi.
Agbanyeghị abụghị mgbanwe mbụ nke oge a, mgbanwe nke French abụrụla ihe a na-atụgharị na ntughari ndị ọzọ. Ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mmekọrịta ọha na eze na 18th narị afọ France ka ọtụtụ nde mmadụ gụrụ - site na ndị ọkà mmụta nọ n'ọkwa dị elu ruo ụmụ akwụkwọ nọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Na igha nke Bastille na July 14th 1789 aghọọla otu oge ịkọwapụta nke akụkọ ntolite Ọdịda Anyanwụ, ụkpụrụ zuru oke nke ndị mmadụ na mgbanwe. Andmụ nwoke na ụmụ nwanyị nke France nke nwere mgbagharị - Louis XVI, Marie Antoinette, Marquis de Lafayette, Honore Mirabeau, Georges Danton, Jean-Paul Marat, Maximilien Robespierre na ndi ozo - amụrụla, nyocha ma kọwaa ya. Ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme etinyela ihe karịrị narị afọ abụọ na-enyocha Ntughari France, na-anwa ikpebi ma ọ bụ n ’ọganiru ọganihu ma ọ bụ na-esite n'agbata echiche ọjọọ.
Ke akpa ileba anya, ihe ndị na-akpata Mgbanwe Ọchịchị France yiri ihe kwụ ọtọ. Ka ọ na-erule ngwụsị narị afọ nke 18, ndị France atachiwo obi ọtụtụ narị afọ nke enweghị ahaghị nhata na nrigbu. Ndi-isi nke ndi mmadu na acho ichoro Ala nke ato, ndị mbịarambịa nke mba ahụ, ịrụ ọrụ ya ma na-atụ ụtụ isi. Eze bi naanịpụrụ naanị ya na Versailles, nke ya ndi eze onye zoro ezo na nchekwube mana enweghi isi. Akụ nke mba ahụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe efu, enweghị nchịkwa, enweghị ike, nrụrụ aka, mmefu ego na itinye aka na agha mba ọzọ.
Ka ọ na-erule ngwụsị 1780s, ndị ozi eze nọ na-achọsi ike imejupụta usoro mmefu ego. Ihe malitere dị ka esemokwu banyere mgbanwe ụtụ isi chọrọ ka amata n'oge na-adịghị anya batara na mmegharị maka mgbanwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke iwu. Ebuso agha na Estates-General n'etiti etiti 1789 mere ka e hiwe otu Nzukọ Mba, nke mbụ nke ọtụtụ gọọmentị ndị na-eme mgbanwe. Ihe omume ndị a, na-enweghị iyi egwu ma ọ bụ mwụfu ọbara, na-atụ aro na ntụgharị nke udo na ọnọdụ ọ ga-ekwe omume. N'ime izu ndị na-abịanụ, oke nke ime ihe ike a ma ama - na Paris, n’ime ime obodo na na Versailles n'onwe ya - egosiputa na mgbanwe mgbanwe ọbara nke na-abịa.
Ebe nrụọrụ weebụ mgbanwe nke French Alfa History bụ akwụkwọ ọgụgụ zuru oke maka akwụkwọ maka ihe omume na France na 1700s. O nwere ihe kariri 500 isi mmalite na nke ozo di iche-iche, gunyere nkọwa zuru ezu nchịkọta edemede, akwụkwọ na eserese eserese. Ebe nrụọrụ weebụ anyị nwekwara ihe ederede maka map na maapụ echiche, nghazi, okukonwere onye bu onye na ozi banyere akụkọ ihe mere eme na ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme. Studentsmụ akwụkwọ nwekwara ike nwalee ihe ha maara ma cheta ọtụtụ ihe dị n'ịntanetị, gụnyere nyocha, ntụgharị okwu na okwu.
Ewezuga isi mmalite, ihe niile dị na Alfa History dere bụ ndị nkuzi ruru eru, ndị edemede na ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme dere. Ozi ndị ọzọ na weebụsaịtị a yana ndị nyere ya aka nwere ike ịdị chọtara ebe a.
Ewezuga isi mmalite, ọdịnaya niile dị na weebụsaịtị a bụ © Alfa History 2018-19. Enwere ike ghara idetu ọdịnaya a, bipigharia ma o bu kesaa ya ozo n’enwetaghi ikike nke Akụkọ Alfa. Maka ozi ndị ọzọ gbasara iji weebụsaịtị Alfa History na ọdịnaya, biko rụtụrụ aka na nke anyị Usoro ojiji.
Ebe ntughari French a nwere edemede, isi mmalite na echiche dị iche iche na ihe omume na France n'etiti 1781 na 1795. Emere saịtị a site na Alfa History. O nwere okwu 228,547 na ibe 353 ma emesiri emelite ya na July 31st 2019. Maka ozi ndị ọzọ, gaa na peeji nke FAQ ma ọ bụ Usoro Ojiji anyị.